अर्को जनयुद्ध किन नि प्रचण्डजी ?
ठूलो रक्तपात गरेर दुईपल्ट सत्ता चलाएका प्रचण्ड अहिले पनि सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष हुन् । यो अवस्थामा फेरि प्रचण्डले अर्को जनयुद्ध हुनेछ, म फेरि जनयुद्धमा फर्कनेछु भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई भययुक्त बनाउनु उचित कि अनुचित ?
भयमुक्त पार्ने जिम्मेवारी लिएर पटक पटक सत्तामा गएका र सत्तामा रहेका प्रचण्डले यसरी अर्को जनयुद्धको धम्की दिनुको पछाडि जुनसुकै कारण भएको भए पनि असलमा उनको यो अनैतिक अभिव्यक्ति नै हो, सशस्त्र विद्रोहको कुराले लज्जामात्र जन्माउने छ । केपी ओली पशुपति शर्माको गीतबाट डराउने, प्रचण्ड मानवाधिकारवादीसँग डराएर रुसी संरक्षण खोज्दै भेनेजुयलाको बारेमा बोलेर नेपालको नीति नै रुसी कम्युनिष्टवादी देखाउने ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने यी नेताहरु कतै न कतै गुण्डा, भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया, ज्यानमाराका संरक्षक बनेका छन् र आफ्नो जंगलराज चलाइरहन पाइयोस् भन्नका लागि सुशासन र कानुनी राजविरोधी अभिव्यक्ति यसरी दिइरहन्छन् । जनता यिनैबाट देशको सुशासन र समृद्धि खोजिरहेका छन् ।
हो प्रचण्डले दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट सरकारसम्मको यात्रा पार गरे । माओवादीलाई एमाओवादी, एमाओवादीलाई नेकपा एमालेसँग मिलाएर नेकपा बनाए । अनेक सहमति, समझदारी र सम्झौताहरूको लामो राजनीतिक साँघु तरेकै हुन् । जनयुद्ध, वार्ता, जनआन्दोलन, अन्तरिम संसद्, अन्तरिम सरकार, संविधानसभा, सरकारको नेतृत्व, नयाँ संविधानको निर्माणजस्ता अनेकौं राजनीतिक निर्णयमा सामेल भए । संघीयता र गणतन्त्र उनकै एजेण्डा थियो । तर अझै पनि आफूलाई शक्तिको केन्द्रविन्दु बनाउन अर्को जनयुद्ध गर्छु भन्न थालेका छन् ।
उनका लडाकु कोही मरे, कोही खाडी पसे, कोही नेपाली सेना बने । कमाण्डर राजनीतिमै छन्, सर्वहाराका नाममा सर्वभक्षी सम्भ्रान्त बनेका छन् । यस्ता प्रचण्डले फेरि केका लागि अर्को जनयुद्ध गर्ने कुरा गरेका ? उनलाई चाहिएको सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति त प्राप्त भइसक्यो, अव केका लागि जनयुद्ध ? जनजिविका र सर्वहारा त कम्युनिष्टहरुको एजेण्डा नै रहेन । सर्वहारा बर्ग त यी नेताहरुलाई नेतृत्वमा पु¥याउने साधनमात्र रहेछन् । हतियारको काम काट्नसम्मका लागि हो, त्यसपछि हतियार भनेको मिल्काउने हो, जनता जो मिल्किएका छन् ।